နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: Good Morning All.....
လှပသော မနက်ခင်းများကို မိမိကိုယ် ဖန်တီးပိုင်ဆိုင်ပြီး မဂ်လာ မနက်ခင်းများ အတွက် အနည်းငယ်သော ဂရုစိုက်မှုလေးများမှ ကျေနပ် အားရလောက်သော အောင်မြင်ခြင်းများ အတွက် မနက်ခင်းသစ် တစ်ခု ဖန်တီး ကြည့်စေချင် ပါသည်။ လူတိုင်းအတွက် သင့်တော်နိုင်သော နည်းလမ်းသစ်များကို စာရှုသူတို့ အတွက် ရည်ရွယ် ရေးသားပါသည်။
တစ်နေ့ တာအတွက် အရေးကြီးသော အိပ်စက်ချိန်အတွက် လင်းရောင်တက်နိုင် မျှနည်းအောင်စီိစဉ်ပါ။
အလင်းရောင်က ဦးနှောက်၏ အနားရမူကို နှောက်အယှက် ဖြစ်စေပါသည်။ အလင်းရောင်သက်သာ စေရန်မျက်လုံးကာသို့ ခန်းစီးများကို တ၀က်ခန့် ချထားခြင်းဖြင့် ပြင်ပ လင်းရောင်ကိုလျှော့ချပါ။
နှိူးစက်ဖြင့်အိပ်ရာထ တက်သူဖြစ်ပါက (၁၅-မိနစ်) စောပေးထားပါ။ အာရုံများနိုးကြားနေပြီ သော်လည်း(၁၅မိနစ်)ခန်. အိပ်ရာထဲလဲ လျှောင်းနေခြင်းက ခွန်အားပိုမိုတိုးစေပါသည်။
အကြောဆန့် လေ့ကျင့်ခန်းမိမိနှင့် သင့်တော်ရာကို(၁၅-စက္ကန့် ခန့် ပြုလုပ်ပါ ။ခန္ဒာ ကိုယ် တစ်ရူးများသို. အောက်စီဂျင်အပြည့် အ၀ပို့ ပေးခြင်းဖြင့် သွေးလည်ပတ်မှူ ကောင်းမွန်ပြီး မအီမသာဖြစ်ခြင်းများ ကင်းရှင်းပါမည်။
စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် ခွန်အားရှိစေသော မှတ်သားစရာအဆိုအမိန့် များကိုမနက်ခင်းတိုင်း ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ။ အဆိုးမြင်စိတ်၏ နှောက်ယှက်ခြင်းများ ကိုမိမိစိတ်သဏ္ဏန်အတွင်း မှတိုက်ထုတ်ပြီုးုဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
မနက်ခင်းးတွင် အသေးအဖွဲစိတ်အနှောက်အယှက်များကို လက်မခံပါနှင့်။ ဥပမာ-ရေချိုးခန်း အိမ်သာမအားခြင်း၊ မနက်စာအဆင်မပြေခြင်းများက တနေ့ တာ၏ခွန်အား ၅၀%ကိုဆုံရှုံးထိခိုက်စေ ပါသည်။
မနက်စာအတွက်အထွေအထူးမစီမံနိုင်လျှင်ပင်သကြားညိုဖြင်.ပြုလုပ်ထားသောကော်ဖီတစ် ခွက်(သို့ )လိမ္မော်ရည်တစ်ခွက် ကိုသုံးဆောင်သင့်ပါသည်။မနက်တိုင်းမပြင်းမပျော.သောအချိုရည်ကိုမှီဝဲသူများ၏ မှတ်ဥာဏ်သည်အသက် ၆၀-၈၀ အထိသူငယ်ပြန်ခြင်းမှတ်ဥာဏ်ချိုယွင်း ခြင်းများကိုကင်းဝေးကြကြောင်းလေ့လာမှူများတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ထိရောက်သော ကိုယ်လက်သန့် စင်မှူကိုဆောင်ရွက်ပါ။ တစ်ညတာ ငြိမ်သက်နေသော မိမိခန္ဓာ ကိုယ်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ ကိုဦးစားပေးသန့် စင်ပါ။ ဥပမာလည်ဂုတ်နှင့်ချိုင်းများ ကိုအဓိကထားပါ။ အကျိုးကျေးဇူးအဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှူနှင့်ကိုယ်ခန္ဒာသန့် ရှင်းမှူ ကိုအချိန်တို အတွင်းရစေပါမည်။
မိမိချစ်ခင်နှစ်သက်သော မိသားစုဝင်များကို နွေးထွေးကြင်နာသောစကား(သို့ ) အပြုအမူဖြင့်မိမိ၏တစ်နေ့တာကိုစတင်ပါ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုအပြည်ဖြင့်နေ့ သစ်ကို ရင်ဆိုင်နိုင်ပါမည်။ချစ်ခင်နှစ်သက်သူများတွင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးများလည်းပါဝင်သည်။
ဂီတ ၏စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစေမှူကို မနက်တိုင်း(၅-မိနစ်)မှ(၁၀-မိနစ်) အထိရအောင် နားထောင်ပါ။မိမိ၏ဖန်တီး မှူစွမ်းရည်များ သိသိသာသာတိုးတက်ပြီး လက်တွေ့ ကျသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ အတွက်အထောက်အကူပြုပါမည်။
အာရုံခံအကြောများ၏ တုံ.ပြန်မှူကောင်းမွန်စေသောမိမိ၏လျှာကို(၁-မိနစ်)ခန့် အချိန်ပေး၍တ်ိုက်ပါ။ မိမိအိပ်စက်ချိန်ပါးစပ် တံခါးပိတ်အတွင်းရှိစေသာ လျှာသည် ပိုးမွှားးဘက်တီးရီးယား ၃၀၀အထက်ကို ညစဉ်တိုင်းပေါက်ဖွားနေသည် ကို သတိရပါ။
လူသားယန္တရားကို ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်ရန် မနက်ခင်းတစ်ခု၏အစကို ယခုကဲ့သို့ စနစ်တကျ အစပျိုးလိုက်မည်ဆိုပါက အောင်မြင်သောနေ့ သစ်များကို မိမိတို.၏တောက်ပသောမနက်ခင်းများ ဖြင့်စတင်နိူင်ကြ ပါစေဟု ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း......
Posted by Hajee Than Hla Oo at 10:21 PM